Beesha Caalamka oo wadda dadaallo shirka Afisyooni loogu soo celinayo Madaxda DFS – Banaadir Times
Beesha Caalamka oo wadda dadaallo shirka Afisyooni loogu soo celinayo Madaxda DFS
By banaadir 9th April 2021 62 No comment
Wakiilada beesha Caalamka ayaa sheegay in ay waddaan dadaallo ay ku doonayaan in ay shirka xerada Afisyooni dib ugu soo celiyaan Madaxda muddo xileedkoodii dhamaaday oo dhawaan sheegay in shirkaasi uu fashilmay.
War kasoo baxay beesha Caalamka ayaa lagu sheegay in ay waddaan kulamo ay doonayaan in mar kale la sii amba qaado dadaallada ku aadan arimaha doorashooyinka iyo xalinta khilaafka ka taagan.
“Iyadoo la eegayo culayska ay leedahay xaaladda hadda taagan, ayaa saaxiibadu waxay wadatashiyo deg deg ah la leeyihiin ka-qaybgalayaasha shirka DFS-DGXF iyo saamilayda kale ee muhiimka ah ee Soomaaliyeed si loo ogaado xulashooyin si dhakhso leh xal loogu heli karo is-mari-waagan, isla markaana si dhakhso leh dib loogu noqdo wadahadalka” ayaa lagu yiri war kasoo baxay.
Beesha Caalamka ayaa muuqa in aysan taageeraysaneyn go’aankii kasoo baxay xukuumadda ee ahaa in uu fashilmay shirkii ka socday xerada Afisyooni.
Puntland oo ku dhawaaqday go’aamo ku saabsan xakameynta cudurka Karoonaha
Midowga Musharixiinta oo kulan deg deg ah ka yeeshay Go’aankii Xukuumadda
Xaaladda Caafimaad ee Guddoomiye Yariisow oo soo hagaageysa.
By banaadir 29th July 2019